Noocyada kalluunka ee De Peces | Kalluunka
Waxaa jira noocyo fara badan oo ah kalluun kuwaas oo buuxiya aquariums-yada bakhaarada xayawaanka ama dukaamada khaaska ah. Kalluunka qaar waa biyo qabow, qaar waa biyo kulul qaarna waa biyo macaan iwm. Midkastaaba wuxuu ubaahanyahay daryeelkaaga inuu noolaado.
Goobtan waxaad ka heli doontaa talooyinka, cuntada, noocyada, faahfaahinta iyo wax kasta oo la xiriira kalluunka Guud ahaan, si loo cadeeyo xayawaankee aan dooran karno, kaas oo aan ku daryeeli karno si nabad ah anaga oo aan khatar galinaynin noloshiisa, maxaa yeelay ma ilaabi karno inuu yahay noole waana inaan hubinaa in badbaado dhibaato la'aan. Ha iloobin in guri kastaa ka duwan yahay oo aanu qof walba daryeeli karin xayawaanka oo dhan.
Midkoodna la'aan ama oksijiin saa'id ah oo ku jirta quraaradda quraaradda
Markii aan bilawnay diyaarinta quraaradda si xayawaankeena yaryar ay ugu noolaan karaan xaalado wanaagsan, waxaan u baahanahay inaan ogaano tirada ...
Kalluunka ku dhex jira quraaradda quraaradda
Markii aan kalluunka ku dhex haysanno quraaradda quraaradda, haddii aan isku darno muunado isku jinsi iyo lab ah, goor dambe ama ...
Sababaha kalluunka u dhinto
Mid ka mid ah su'aalaha waaweyn ee aan marar badan isweydiinno ayaa ah sababta kalluunku u dhinto markaan ka fikirno taas ...
Markaan diyaarinayno quraaradda quraaradda waa inaan ogaano inay jiraan waxyaabo leh muuqaal qurxin iyo mid kale oo lagama maarmaan u ah ...
Si loo ilaaliyo tayada aquariumyadeena loona dejiyo xaalado wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta saxda ah iyo dayactirka ...
Shark ugu weyn adduunka
Markii aan ka hadlayno shark, way adag tahay in la isbarbar dhigo noocyada u dhexeeya. Xaaladdan, waxaan ...
Sonar ugu fiican kalluumeysiga
Markaan kalluumeysiga aadno waxaan leenahay labo nooc oo isbeddel ah. Mid waa midka soo jireenka ah ee aan ku tuurayno bakooradda iyo ...
Sida ay jiraan kalluun xasharan, sidoo kale waxaa jira kalluunno badeed. Xamaasadahaasi waa xiddigaha ...
Mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu yaabka badan uguna qarsoon ee ka jira badaha waa libaax badeedka. Waan ogahay…
Xayawaanka loo yaqaan 'Megalodon shark'
Waxaan u safreynaa taariikh hore si aan u xasuusano shark noolaa 19 milyan oo sano ka hor. Magaciisu waa ...
Kalluunka dhagaxa ah
Kaluun balanbaalis ah